Golaha Ammaanka iyo AU oo ka shiraya ciidammada Juba la gaynayo - BBC News Somali
Golaha Ammaanka iyo AU oo ka shiraya ciidammada Juba la gaynayo
Image caption Madaxweynaha Suudaanta Koonfureed, Salva Kiir
Wafti ka socdo Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa lagu wadaa inuu mgaalada Addis Ababa kula kulmo saraakiil ka tirsan Midowga Africa maanta kaddib markii madaxweyaha Suudaanta Koonfureed uu aqbalay in ciidammo shisheeye oo dheeraad ah la geeyo dalkiisa.
Salva Kiir ayaa horey ugu gacan sayray ciidamadaasi, waxa uuna sheegayay in arrintaasi ay lid ku tahay madax bannaanida dalkiisa.
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa kol hore anisxiyay in ciidamo gaaraya 4,000 oo askeri la geeya dalka Suudaanta Koonfurred kaddib markii ay rabshado u dhaxeeya taageerayaasha Salva Kiir iyo kuwa Riek Machar dhawaan ka dhaceen magaalada Juba.
Muddo todobaadya ah ayay dowladdiisa cadaadis iyo goodis ah in lagu soo rogayo cunaqabatayn kala kulmeysay beesha caalamka, kaddib markii ay diidday inay aqbasho ciidammadan ka socda waddamada gobolka.
Hasayeeshee ugu dambeyntii ra'yigaasi waa ay badashay, oo haatan waxa ay sheegaysaa in ay ogoshahay in ciidammadaa dheeraadka ah ay dalkeeda soo galaan, kuwaasi oo xoojin doona ciidammada nabad ilaalinta Qaramada Midoobay ee gaaraya 12,000 ee horayba halkaasi u joogay.
Kaddib shir dhex maray Madaxweyne Kiir iyo wafdiga ka socday Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay, ayuu wasiirka arrimaha golaha wasiirada ee dalkaasi Martin Elia Lomoro, waxa uu sheegay in wali si qoto dheer looga shaqeynayo qaabka shaqo ee ciidamadaasi.
Waxa uuna intaasi ku daray in dowladdu ay sidoo kale fududeyn doonto dhaqdhaqaaqa xorta ah ee howlgalka Qaramada Midoobay, si ay gacan uga gaysato hawsha loo igmaday ee ah ilaalinta dadka rayidka ah iyo in dadka la gaarsiiyo gargaarka bani'aadanimo ee ay u baahan yihiin.